Sunday January 26, 2020 - 21:24:11 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Jeneraalka hoggaamiya ciidamada melleteriga wadanka Burundi ayaa majaraha uqabtay xisbiga talada haya taas oo ka dhigan in Melleterigu markale wadanka maamuli doono.
Evariste Ndayishimiye waa taliyaha ciidanka Burundi
Munaasabad ka dhacday duleedka magaalada caasimadda ah ee Bujumbura ayaa guddoomiyaha Xisbiga CNDD-FDD ee talada haya loogu doortay Jeneraal Evariste Ndayishimiye oo ah taliyaha guud ee ciidamada Melleteriga Burundi.
Warbaahinta Afka dowladda ku hadasha ayaa sheegtay in hoggaaminta Xisbul Xaakimka loo caleema saaray Jeneraal Evariste Ndayishimiye waxaana madashii lagu caleema saarayay ku sugnaa mas'uuliyiinta ugu sarreeya xukuumadda marka laga reebo madaxweynaha.
Jeneraalkan majaraha uqabtay xisbiga talada haya ayaa isku taagi doono xilka madaxweynaha doorashada dhici doonta bisha May ee sanaddan 2020, kooxaha mucaaradka waxay sheegayaan in madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanayo ee Pierre Nkurunziza uu taliyihiisi Melleteriga usoo xushay in uu xilka ka dhaxlo.
Wadanka Burundi ayaa laba sano ka hor martigeliyay dagaal culus kaas oo sababay in boqolaal kun oo mucaarad ubadan ay ucararaan wadamada dariska ah sida Tanzania iyo Uganda.
Madaxweynaha waqtigiisu sii idlaanayo ee Pierre Nkurunziza ayaa talada Burundi qabtay sanaddii 2005 xilligaas oo uu soo idlaaday dagaalkii Sokeeye ee wadankaasi halakeeyay wuxuuna ninkaan madax u ahaa maleeshiyo Fallaaga ah oo dad badan laysay xilligii uu socday dagaalkii sokeeye.
Kim Jong-un oo laalay Howlgal Melleteri oo ka dhan ahaa Kuuriyada Koonfureed.